Dia ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2018 13:17 GMT
Ho an'ny Irakiana, andro lehibe ny 15 Oktobra …andron'ny Fitsapa-kevi-bahoaka momba ny Lalàmpanorenana Irakiana. Ny fifidianana dia tsotra, eny na tsia amin'ny Lalàm-panorenana Irakiana. Afaka mandatsa-bato avokoa ny Irakiana rehetra, na dia ny mpanao didy jadona teo aloha Sadaam Hussein aza. Maresaka amin'izany tranga izany ny vahoaka Kiorda ao Iràka. Sami avy amin'ny Iraqi Thoughts mijery ny lalàm-panorenana vaovao amin'ny alalan'ny maso Irakiana Sonita, ary mahita ny fanamarinana amin'ny fanoherana azy, fa koa mahita fa amin'ny alalan'ny fomba fijeriny Kiorda manokana, tsy maintsy mifidy izany izy. Hiwa avy ao amin'ny Hiwa's Hopes manontany ny safidiny manokana amin'ity fitsapa-kevi-bahoaka ity:
I voted in the elections, I am not sure if I did the right thing? do you think my successors won't accuse us of being coward enough to ask for our full self-determination?
Tsy fantatro izay tokony holazaina,
Nifidy tamin'ny fifidianana aho, tsy azoko antoka raha nanao ny marina aho? Heverinao ve fa tsy hiampanga antsika ho kanosa mba hangataka ny fahavononantsika tanteraka ireo mpandimby antsika?
Farany, naneho fijery hoe aleo jerena ho hita momba ny fitsapa-kevi-bahoaka i Hiwa, izay toa fomba fijery mahazatra mikasika io lohahevitra io.
Mifindra any avaratr'i Kurdistan, Delal avy ao amin'ny The Kurdistan Bloggers Union miresaka ny sasany amin'ireo vaovao lehibe momba ny Kiorda ao amin'ny sisintanin'i Torkia sy Syria; indrindra ny fanakatonana ny sekoly fianarana teny Kiorda any Torkia. Eo indrindra, raha mitady teny fampidirana amin'ny fiteny Kiorda ianao, ny vondrona bilaogy Learn Kurdish no fanombohana tsara.
Ary mifindra any amin'ny faritra atsinanana ao Kiordistan, Medya avy ao amin'ny Medya Daily miresaka momba ny teritery amin'ny fibilaogina any amin'ny firenena izay tsy dia mandray fomba fijery hafa. Tsapany fa indraindray ny bilaogy dia manokatra ny tenany amin'ny fandrahonana avy amin'ny hafa, na izany mpianatra ao amin'ny efitranom-pianarany, hatramin'ny governemanta Iraniana mihitsy. Manantena izahay fa mbola hanohy hibilaogy izy ary ho voaaro.
Blaogy vaovao iray natokana ho an'i Kurdistan Atsinanana no nanomboka vao haingana, ary mitondra ny lohateny hoe Land of the Sun: Kurdistan. Raha mbola manomboka fotsiny amin'izao fotoana izao, dia mety ho bilaogy lehibe tsara topaza-maso.
Misy ireo andiana bilaogy mpomba ny Kiorda amin'ny teny frantsay (ahitana teny Anglisy indraindray). Tsy Kiorda mihitsy ireo mpanoratra fa efa nonina na niasa na tamin'ny faritra Kiorda sy ny vahoaka Kiorda. Raha mahay mamaky teny frantsay ianao, dia iangaviako hitsidika azy ireo, satria manome fomba fijery tsy mitanila sy tsara momba ny vahoaka Kiorda izy ireo. Incoherent Thoughts avy amin'ny mpiandraikitra tranomboky ao amin'ny Ivon-toerana Kiorda ao Paris, OFK momba ny dia ao amin'ny faritr'i Kurdistan, Bienvenue à Van izay mitantara ny faritr'i Van ao Torkia/Kiordistan Avaratra, ary ny Chroniques de Beyoglu avy amin'ny lehilahy Frantsay miasa any Torkia .